HORDHACA: Heegan fc Vs Dekedda Fc- Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulankan adag – Gool FM
HORDHACA: Heegan fc Vs Dekedda Fc- Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulankan adag
(Soomaaliya) 29 Juunyo 2019. Kooxaha Heegan fc iyo Dekedda ayaa kulan xiiso badan kuwada dheeli doona garoonka Banadir Stadium ciyaar qeyb ka ah horyaalka Somali Premier League.
Kulankan ayaa ah midkii 81-aad ee laga dheelo horyaalka si kale hadii aan u micneyo waa kulankii 17-aad ee labadan kooxod ka dheelan horyaalka taas oo ka dhigan in min hal kulan u hartay labada kooxod fasal ciyaareedkan horyaalka 2018-19.
Labadan kooxod waxaa soo jiraan u ahaa xifaaltanka kubadda cagta marka ay iska hor imaadan tartamada kala duwan.
Kooxda Dekedda labadii sano ee la soo dhaafay iyada ayaa ku guuleysaneysay Horyaalka Somali Premier League Halka Heegan ay ugu dambeysay in ay gacanta ku dhigto Horyaalka Sanadkii 2014/15-kii.
Afartii Kulan ee ugu dambeysay ay labadan kooxod isku arkan horyaalka Somali Premier League waxey ku kala baxeyn bar baro taa oo aan kala jeedo iney kala qaateyn dhibcaha.
Xidigaha kala ah Cabdicasiis Catoosh, maxamed Nuur iyo Saabir ayaa kulankan ka hor imaan doonan kooxdoodii hore ee Heegan iyago iminka wata fanaanada kooxda Dekedda fc.
Cabdicasiis Catoosh kulankii ugu dambeyay gool qurux badan ayuu ka dhaliyay kooxdiise hore ee Heegan goolkaas oo ahaa mid free kick ama laadka xorta ah.
Kulankii ugu dambeyay ay wajiga hore ee horyaalka isku arkan waxey ku kala baxeyn bar baro 1-1, ciyaar dhacday 28-03-19.
Dekedda kulankii ugu dambeyay waxey 4-1 ugu soo adkaatay naadiga Jazeera Sports Club halka Heegan ciyaartii ugu dambeysay bar baro 1-1 la soo gashay wiilsha Horseed ciyaarta loo magic bixiyay Kulanka Qaranka.
Labadan kooxod ayaa waxaa u haray min hal kulan marka laga saaro xisaabta kulankan, Dekedda waxaa u hartay kulanka ugu dambeya horyaalka naadiga Muqdisho City Club waana kulanka go’aamin kara horyaalka halka Heegan u hartay Gaadiidka kulankeeda ugu dambeyay horyaalka fasal ciyaareedkan.
Kooxda ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Heegan kulan ciyaareedkan waxaa ka maqnaanay 4- xidigo oo muhiim ka ahaa safka kooxdan waxaana kamid ah Mahad Saha oo ku maqan saddex jaalo, Jabriil Xasan Fariid oo dhawaac ku seegaya ciyaartan, Yaxye oo daafaca ugu ciyaara kooxdan ayaa isagana dhaawac ku maqnaanaya iyo Mahad Cali Beerey oo waxyeelo ku seegaya.
Difaacayasha horyaalka ee Dekedda kulan ciyaareedkan waxaa dib ugu soo laabanaya ciyaaryahankeeda reer Kenya ee Rymound kaas oo safar kooxdiisa ugu maqna balse kulankan diyaar ayuu u yahay.
Dekedda ayaa leh 36-dhibcood halka Heegan ay iska leedhahay 29-dhibcood.
IS ARAGA LABADA KOOXOOD:
16/02/2017 Dekedda SC 1 : 1 Heegan S.C
Kooxaha: Dekedda fc iyo Heegan fc